खेलकुद Archives - Page 68 of 69 -
एसेन्सियो नहुँदा रियलसँग के छ विकल्प ?
एजेन्सी – रियल म्याड्रिडका स्पेनिस मिडफिल्डर मार्को एसेन्सियो घुँडाको चोटका कारण अर्को सिजन पूरै विश्राममा रहने पक्का भएको छ । प्रि सिजनको मैत्रीपूर्ण खेलमा आर्सनलविरुद्ध फुटबलमा करिअर नै सक्काउने किसिमको …
बार्सिलोनाले पुगेका ग्रिजम्यानलाई प्रतिबन्ध हुन सक्ने ! यस्तो छ कारण
एजेन्सी, मड्रिड । ला लिगाका अध्यक्ष जेभिएर टेबासले एटलेटिको मड्रिडले औँफ्ना पूर्वखेलाडी एन्टोनी ग्रिजम्यानलाई प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव गरेको बताएका छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ । खेलाडी …
पहिलो खेलमै सन्दीपबिनाको टोरोन्टो पराजित !
एजेन्सी – नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित टोरन्टो नेशनल पहिलो खेलमै पराजित भएको छ । उद्धघाटन खेलमा भेन्कुवर नाइट्ससँग नेशनल ८ विकेटले पराजित भएको हो । नेशनलले प्रस्तुत गरेको …